Maitiro ekufananidza nyore nyore iCloud neGoogle makarenda | IPhone nhau
louis padilla | | ICloud, Zvidzidzo uye zvinyorwa
Kunyangwe paine chokwadi chekuti vazhinji vedu tine zvishandiso zvedu zvese mukati meiyo Apple ecosystem, iko kusingagumi kweGoogle mune yega yega yega yeesevhisi yeinternet zvinoreva kuti pane dzakawanda nguva iwe unofanirwa kushandisa imwe yacho. Mumwe wemibvunzo inonyanyo bvunzwa ndeyekuti ungawiriranise sei iCloud neGoogle Calendar makarenda otomatiki, uye ndizvo zvatichazotsanangudza kwauri nhasi.
Iyi sarudzo iri nyore pane dzakawanda nguva, semuenzaniso kana tiine Android smartphone kana piritsi, kana kana tiri kubasa "tichimanikidzwa" kushandisa Google Calendar. Hapana chikonzero chekuparadza maawa kana mari uchitsvaga zvikumbiro zvinotibvumidza kuti tiite iri basa, nekuti masevhisi echinyakare anotitendera kuti tizviite zvoga uye zvemahara, uye ndizvo zvatichazokutsanangurira pazasi zvakadzama.
1 Mbiri mbiri dzakakosha kuti uchengete mundangariro
2 1. Goverana kubva kuICloud
3 2. Tumira kuGoogle Calendar
Mbiri mbiri dzakakosha kuti uchengete mundangariro
Kuti tienzanise makarenda aya tinofanirwa kubvuma kusagadzikana kudiki. Chekutanga ndechekuti isu tichafanirwa kugovana pachena iyo iCloud khalendari isu tinoda kuyananisa, iyo inogona kuve yekukanganisa kukuru mune zvimwe zviitiko (kwete zvangu). Izvi zvinoreva kuti chero munhu ane iyo inogadzira link anogona kuwana iyo khalendari, asi chinongedzo hachisi nyore kuwana.
Dambudziko repiri nderekuti kuwiriranisa inzira imwe chete, kubva kuICloud kuenda kuGoogle, ndokuti kubva kuGoogle Calendar iwe haugone kugadzirisa chero chinhu cheayo makarenda. Kupfuura kusagadzikana, mune yangu mukana, asi kana iwe uchida izvi kuti zvisadaro, iyi imwe sarudzo yatinokupa pano haishande kwauri.
1. Goverana kubva kuICloud
Nhanho yekutanga kugovana khalendari kubva kuacloud account yako. Zvazviri kubva kubhurawuza remakomputa isu tinowana iCloud.com uye kubva mukati mekendari sarudzo tinodzvanya pane icon yemasaisai mana (senge iyo WiFi icon) kuunza sarudzo dzekugovana. Isu tinofanirwa kumisikidza Ruzhinji Karenda sarudzo, uye kuteedzera iyo link inowoneka pasi payo.
2. Tumira kuGoogle Calendar
Iye zvino tinofanirwa kuwana Google Calendar kubva kubhurawuza remakomputa, uye mukati mechidzitiro chikuru wedzera karenda kubva kuURL, sezvakaratidzwa mupikicha.
Mukati memunda unoenderana tinonama kero ye URL yatakateedzera kare, asi chimwe chinhu chinofanirwa kuitwa usati wawedzera kuGoogle. Tinofanira kushandura chikamu chekutanga che "webcal" kalendari kuenda ku "http" sezvazvinoratidzika mune iyo skrini. Kana izvi zvangoitwa, tinogona kudzvanya pa "Wedzera Karenda" kuti igoonekwa muGoogle Calendar.
Kuvhiya uku tinogona kuzvidzokorora kakawanda sezvatinoda nemamwe makarenda eICloud. Mukati mezvisarudzo zvekarenda yega yega muGoogle Calendar tinogona kuchinja zita, ruvara, nezvimwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekufananidza iCloud neGoogle makarenda zviri nyore
Mhoroi, ini ndatevera nhanho uye muPC vhezheni yekendari shanduko dzandinoita parunhare hadzina kugadziridzwa. Kana chiri chokwadi kuti pakutanga chinondiunzira zviitiko zve nhare, asi kana karenda yagadzirwa, iyo yekuvandudza iphone => pc haiende, asi neimwe nzira yakatenderedza, ndiko kuti, PC kune nhare (zvirokwazvo, iri ipapo ipapo)
Chii chingave chiri kutadza ???
Hi Luis, ndinotenda nekuda kwekutumira. Kana ndangopindirana yakagovaniswa iCloud khalendari kukombuta yangu, handikwanise kuramba ndichiona zvigadziriso kune iyo khalendari. Zvinoita sekunge zviitiko zvacho zvakawiriraniswa kusvika panguva iyoyo uyezve hapasisina kuwiriranisa. Chero zano?
Zvakanaka, ini handizive ... tarisa matanho nekuti anondivandudza
Ini ndakafanana naAndres, uye ndakazviita kunge chiuru. Zvandinoisa pane iyo iPhone, hazvichaonekwi muGoogle khalendari
Kutenda kwazvo!!! mushure mekutsvaga kwakawanda nemazano ako ndakazviita mune imwe nguva .... kwaziso
the din akadaro
Ndakaita izvi kanoverengeka uye zviitiko zvandinogadzira muICloud khalendari hazvioneke muGoogle khalendari. Pane chingave zvachinja here?
Pindura kuna mukuru
Zvinoitika kwandiri zvakangofanana. Ini ndinoita nhanho idzi (ini ndakaedza nema mobiles akasiyana) uye zviitiko zvakagadzirwa kusvika panguva iyoyo zvinoonekwa asi izvo zvitsva hazvichaoneke, kana kundiyambira, kana kumbondifananidza zvakare. Zvinoita sekunge iro ruzivo rwatovepo asi iyo nyowani haigadzirise. Chero ani anoziva chero imwe nzira? Ini ndinoramba kuti nditenge iPhone nekuda kweiri karenda zvisina maturo, wow. Asi ini ndinoida iyo yezvinhu zvevashandi !!
Igoñigo Iturmendi akadaro
Kubudirira zvakadini! Ndatenda, Luis.
Pindura Íñigo Iturmendi
Ricardo Galache akadaro
Hukuru. Ini handina kuwana ruzivo mune chero imwe chinongedzo.
Pindura Ricardo Galache
Yakanaka kwazvo posvo. Ndatenda zvikuru nekupa.
Daniel Duarte akadaro
Ndatenda! Inobatsira, yakajeka uye yakapfupika.
Pindura kuna Daniel Duarte
Mhoroi, ini ndakawiriranisa makarenda, asi kana ini ndikawedzera chiyeuchidzo chitsva muICloud khalendari, haina kugadziridzwa mukarenda yegmal.
Ini ndagadzira kuwiriranisa kuitira kuti muGoogle Chalenda zviitiko zveApplendari zvionekwe. Vachaenderana otomatiki mune ramangwana kana ini ndinofanirwa kuzviita pese panogadzirwa chiitiko chitsva mugoogle khalendari?
Tile Sport, kuongororwa kweiyi isingagadzike uye yakanakisa tracker